Doorashada USA: Loolan xoogan oo u dhaxeeya Trump iyo Qoyska reer Bush [Daawo] - iftineducation.com
iftineducation.com – Madaxweynihii hore ee dalka Maraykanka George W Bush ayaa kusoo biiray ololaha lagu taageerayo Murashax Jeb Bush oo ay walaalo yihiin isla markaana uu tartan xoogan uu ka dhaxeeyo Murashaxa Donald Trump.
Trump iyo Jeb Bush ayaa u loolamaya inay noqdaan murashaxa rasmiga ah ee Xisbiga Jamhuuriga, taasi ayaa keentay in Donald Trump marar badan uu weerar afka ah ku qaado Jeb Bush oo horey usoo ahaan jiray Madaxa Gobalka Florida, isla markaana ah nin ay walaalo yihiin George W Bush.
Donald Trump ayaa ku cel celiyey marar badan in taageerayaasha xisbiga Jamhuuriga aysan dooneyn inay markale cod ku taageeraan Qoyska reer Bush oo uu sheegay inay horey siyaasada ugu fashileen, isagoona tusaale usoo qaatay weerarkii September 11 2001 wakhtigaasi oo uu xilka hayey George Bush. Trump ayaa sheegay in George uu dayacay amniga wadanka Maraykanka, isla markaana Jeb uu yahay nin kasii liita.
Doodii ugu danbeysay ee Trump vs Jeb Bush
George W Bush oo in muddo ah aan lagu arag fagaarayaasha siyaasada ayaa shalay markii ugu horeysay ka qeyb qaatay ololaha lagu taageerayo Jeb Bush ee ka socda gobalka South Caroline oo ay maalmaha soo socda ka dhici doonto codbixinta horudhaca ah ee lagu kala saarayo murashaxiinta Xisbiga Jamhuuriga.
“…Waan la socdaa in shacabka Maraykanka ay xiligan careysan yihiin, balse Xilka Madaxweynaha maaha inaan u doorano qof astaan u noqonaya carada ee waxaa loo baahan yahay hogaamiye degen oo wax qaban kara….” ayuu yiri Gerorge W Bush oo si toos ah ugu jawaabayey Donald Trump.
Trump ayaa isagu weli hogaaminaya codadka ugu badan ee murashaxiinta Jamhuuriga heystaan, halka Jeb Bush uu qarka u saaran yahay inuu tartanka isaga haro isagoona kamid ah murashaxiinta ugu codka yar ee xiligan ka dhex loolamaya xisbigaasi Jamhuuriga.
Jeb Bush ayaa kamid ah murashaxiinta taageerada ka heysta ganacsatada udub dhexaadka u ah xisbiga Jamhuuriga, halka Trump oo maalqabeen ah uu sheego inuu isaga jeebkiisa ka maalgeliyo ololihiisa, Jeb ayaa rajo ka qaba inuu codod badan ka helo gobalka South Caroline, gobalkaasi oo uu doorashooyinkii hore ku guuleystay walaalkii Madaxweynihii hore George W Bush.
Warbixin ku saabsan xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya